LEGO ဒီဇိုင်နာများကမထင်မရှား Harry Potter minifigure အသစ်ကိုရှင်းပြသည်
အဆိုပါ Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ဒီဇိုင်နာများသည်နွေရာသီ၏နှစ် ၂၀ ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ဝတ်စုံများထဲမှမယုံနိုင်လောက်အောင်မထင်မရှား minifigure တစ်ခုကိုဘာကြောင့်ထည့်သွင်းခဲ့သည်ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
minifigure line-up တွေထဲမှာ ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း (ပြန်လည်သုံးသပ်) သည်ပါမောက္ခ Sinistra ဖြစ်သည် ဟယ်ရီပေါ်တာ ရုပ်ရှင်များ၊ လိုင်းများလုံးဝမရှိခဲ့ပါ။ အသစ်ပြုပြင်ထားသော Wizarding World ဆောင်ပုဒ်သည်မထင်မရှားအက္ခရာများနှင့်မဝေးလှပါartနွေရာသီမှာလှိုင်းအလျား (မင်းမှတ်မိလား မစ္စတာနှင့်ဆရာမ Flume?) Sinistra သည်ဤအချက်၌အရေးကြီးသောအခိုက်အတန့်တစ်ခုကိုအာရုံစိုက်နေသည့် set အတွက်အံ့သြစရာရွေးချယ်မှုတစ်ခုလိုဖြစ်နေသလား ဟယ်ရီပေါ်တာ ကို Canon ။
Tips & Bricks များ နက္ခတ္တဗေဒပါမောက္ခ၏ပါ ၀ င်မှုကိုမေးမြန်းစုံစမ်းခဲ့သည် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ဒီနှစ်အတွက်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ Lego Fan Media ပွဲနှင့်အကြီးတန်းဒီဇိုင်နာ Yi-Chien Cheng နှင့် Design Master Marcos Bessa တို့ကဇာတ်ကောင်ရွေးချယ်မှုသည်မတူကွဲပြားခြင်းနှင့်ကိုယ်စားပြုမှု၏အဓိကကိစ္စရပ်များအပေါ်တွင်မူတည်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့သည်။
“ ငါတို့က IP ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေအတွင်းမှာရှေ့ဆက်ကိုယ်စားပြုဖို့သေချာတယ်” ဟု Yi-Chien ကဆိုသည်။ “ ငါငယ်ငယ်တုန်းက၊ ယောက်ျားလေးရုပ်ကိုးရုပ်၊ အမျိုးသမီးပုံတစ်ပုံရှိတယ်၊ ငါ့အတွက်တစ် ဦး တည်းသောအမျိုးသမီးပုံကငါပိုလိုချင်ခဲ့တဲ့ရတနာတစ်ခုပဲ။ ငါတို့ကကျားမဘက်မလိုက်တဲ့မျှခြေကိုပိုပေးဖို့သေချာတယ်။ ငါတို့ကအရင်းအမြစ်ပစ္စည်းတွေကန့်သတ်ထားပေမယ့်မတူကွဲပြားမှုကိုတိုးတက်အောင်ငါတို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေတယ်။ ”
“ [ပါမောက္ခ Sinistra] သည်ငါတို့နှင့် p နှင့်အတူတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု၏ရလဒ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်artမလိုပါဘူး” ဟု Marcos ကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ “ ငါတို့ကကိုယ်စားပြုနိုင်မယ့်နေရာကိုစားပွဲပေါ်မှာတင်ချင်တယ်။ အများကြီးမပါရင်တောင်ပါမောက္ခ Sinistra ကိုရုပ်ရှင်တွေမှာတွေ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကသူ့ကိုကိုယ်စားပြုဖို့သေချာချင်တယ်။ ”
သင်သည်သင်၏ကွဲပြားမှုကိုချဲ့ထွင်နိုင်သည် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ပါမောက္ခ Sinistra ကိုကောက်ယူခြင်းဖြင့် minifigure စုဆောင်းခြင်း ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း(ယခုနွေရာသီရဲ့နှစ် ၂၀ ပြည့်နှစ်ပတ်လည်လှိုင်း၏ကျန်များနှင့်အတူမှာယူနိုင်ပါပြီ) ။
ကြောင်းအလုပ်ထောက်ပံ့စဉ်းစားပါ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစုံတယောက်သောသူသည်သုံးနိုင်သည် တွဲဖက်လင့်ခ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
← LEGO ကိုလိုက်နာပါ Star Wars: ယနေ့ Skywalker Saga သတင်းနှင့်အတူ Brick Fanatics'ဘလော့ခ်
LEGO Harry Potter နှစ် ၂၀ ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ရွှေရုပ်သေးသေးလေးကိုအတူတကွပြသသည် →